सगरमाथामा राखिएका उपकरणले पठाउँदैछन् यस्ता मौसम विवरण – RealPati.com
काठमाडौँ । मौसम सम्बन्धी यो विवरण कहाँ को होला? पक्कै पनि तपाईंले कुनै चिसो स्थानको नै हो भन्ने अनुमान लगाउनु भयो होला। त्यसो हो भने तपाईं सही हुनुहुन्छ। तर कुन होला त त्यो चिसो स्थान ? शुक्रवार बिहान ७ बजे यस्तो मौसम भएको स्थान हो- सगरमाथाको चुचुरो भन्दा ठ्याक्कै ४ सय १८ मिटर तलको भाग अर्थात् सगरमाथाको ८ हजार ४ सय ३० मिटर उचाइ क्षेत्र। जसलाई बाल्कोनी पनि भनिन्छ।
तर यो विवरण सगरमाथा क्षेत्रमा बसेर हेरिएको भने होइन। न त नजिकैको स्थानमा बसेर कुनै व्यक्तिले पठाएको नै। यस्तो विवरण आएको हो, हालै मात्र खुम्बु क्षेत्र, सगरमाथा आधार शिविरदेखि ८ हजार ४ सय ३० मिटर क्षेत्रमा राखिएका मौसमको जानकारी दिने उपकरणहरूबाट।
सगरमाथा क्षेत्रका पाँच स्थानमा राखिएका ती उपकरणहरूले हाल दैनिक रूपमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र त्रिभुवन विश्व विद्यालय जल तथा मौसम विभागमा पठाइरहेका छन्। अनि कम्प्युटरमा ती विवरणहरू हेरेर अध्ययन गर्न चाहनेहरूले सगरमाथा क्षेत्रको मौसम परिवर्तन सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू बटुलिरहेका छन्।
न्याशनल जियोग्राफिक सोसाइटी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले गत एप्रिलदेखि यही जुन महिनासम्म राखेका ती उपकरणहरूलाई न्याशनल जियोग्राफीले “विश्वैकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा राखिएका मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने उपकरण” भनेर दाबी गरेको छ। उक्त टोली र परियोजनामा सामेल नेपाली वैज्ञानिकहरूका अनुसार सगरमाथा क्षेत्रको उच्च भागमा ‘रियल टाइम’ अर्थात् तत्कालको तत्कालै सूचना दिने यस्ता खाले उपकरणहरू राखिएको पहिलो पटक हो।
कांग्रेसले २९ गतेपछि पनि थप आन्दोलन चर्काउने